Top 5 weerar Hard Drive Data Recovery Software y
3.3 Macbook Pro Hard Drive Recovery
Hard drives waa qayb gaar ah ee lagu kaydiyo xogta computer ah. Waxay ka kooban yihiin ee ku cajaladaha yar isku midka ah daboolay kiis, leewarka, dhidibka leewarka, gacanta leewarka, xeedho, dunmiiqa, madaxa, iyo iskuxirka xoog iyo bixisaa.
Qeybta 1: weerar Top Hard Drive Recovery Software
Kabashada Xogta laga eryi weerar fududaan kara ama xanuun badan ku xiran tahay heerka soo weerarey oo nooca weerarkaas, weerar hardware ama weerar software ah. Software weerarada ay noqon karto ilaa sahlan inuu ka soo kabsado hab ah in xogta lagu kaydiyaa cajaladaha jir ahaan oo kala duwan. Ma aha kiiska mar walba. Software Duqeynta ayaa laga yaabaa inuu u adag yahay sida weerarada hardware marka soo socda si ay u soo kabsaday xogta ku dul disk fashilmay.
Waxaa jiray dhibaatooyin iyo xal. Waxa uu helo xitaa adag marka aad rabto in aad ka soo baxdo xogta qaar ka mid ah gacanta ka ah drive malfunctioned adag. Haddii drive adag oo aan weerar qaybiyay, uma baahnid inaad isticmaasho hababka adag. Si aad si sahlan ay jiraan codsiyo software taas oo ka dhigi kabashada weerar fudud.
ReclaiMe Recovery weerar Free http://www.freeraidrecovery.com/ Si ay u soo bixi Free Windows
Zero waseeqeeyay Recovery http://www.za-recovery.com/ $39.95 ~ Windows.Linux
DiskInternals Recovery weerar isticmaalaa nidaam si buuxda iswada u soo kabashada xogta ka soo weeraro. Ma aha khasab in ay dib u soo kabashada ah xogta si toos ah ula software this; waxa kale oo aad u gacanta samayn kara adiga.
Hab ayaa si toos ah saamaxaya kuwa isticmaala inay dib u fadhiisan oo ha software ka wada sameeya.
Waxaa bedeli kartid hababka si toos ah iyo buuga.
Waxaa si toos ah u ogaadaa nooca disk soo diyaariyeen.
Hab ayaa gacanta lagu dhigi doonaa software inay go'aan noocan ah u diyaariyey ku salaysan gashiga user halkii xaqiiqada dhabta ah.
Software GetDataBack ku yimaadaan laba nooc, mid ka mid ah baruurta iyo mid ka mid ah hababka file NTFS. Waxaad ka iibsan kartaa oo ku salaysan baahidaada.
Read design oo keliya; ma deletions shil waa u suurtoobaan.
Taageerada SSD, USB, kaararka flash oo dhan oo adag.
Taageerada NTFS, FAT12, FAT16 iyo noocyada file FAT32.
Waxay u badan ma in ay ka shaqeeyaan in ka yar kumbiyuutarada, gaar ahaan Windows Operating System.
3.ReclaiMe Free weerar Recovery
ReclaiMe Recovery weerar Free ma aha software ah oo gebi ahaanba bilaash ah soo kabashada xogta. Tani waa madal ah halkaas oo aad si dhab ah u arki karaan oo files ayaa diyaar u ah soo kabashada. Waxaad go'aansan kartaa in aad leedahay xogta aad u baahan yahay iyo in kale.
Waxaad ka arki kartaa buugga, files iyo fayl in disk ku burburay lacag la'aan ah.
Heerarka kala duwan ee weerar lagu soo kabsaday laga yaabaa.
Qalabka NAS Inta badan waxaa taageera u soo kabashada xogta.
Marka aad ogaato macluumaadka aad u baahan yahay, waxaad u baahan doontaa si aad u iibsato qaar dhabta ah software kabashada xogta ama aan ka helo meel aad disk in aad nuqulka xogta aad.
Waddaa kaliya on Windows Operating System.
4.Zero waseeqeeyay Recovery
Software Tani waxay u ogolaaneysaa in aad ka bogsato xogta laga eryi kaydinta aad arrimaha kala duwan si ay u xaliyaan. Kabashada xogta weerar waa mid ka mid ah fursadaha. Software Tani ay sameeyeen qaar ka mid ah hawlaha kale.
Waxaa soo kaban karaa muda formatted, files tirtiray iyo files cayriin.
Kabashada Gaarka ah ee sawirrada dhijitaalka ah.
MBR soo kabashada dhaawaca.
Waddaa kaliya ee Windows iyo Linux; ma in Mac
Hanaanka soo kabashada waxay qaadataa waqti dheer oo aan aad qaban karto dhexe ee ilaa 3 saacadood.
Tani waa collection of software markii hore soo saaray technology R-Tools. Waxa uu isticmaalaa qaar ka mid ah farsamooyinka iyo sifaatka aad u sareeya oo ka bogsanaya xogta maanta.
Xogta aqoonsiga hannaankii iyo fasiraadda sida.
Heerarka Non heerka nested ah weerar lagu soo kabsaday laga yaabaa.
Aqoonsi dhimaya weerar Automatic iyo baaritaan joogta ah.
Damaanad No inuu ka soo kabsado dhammaan faylasha lumay.
Overwriting laga yaabo in ay dhacaan hadii ay isku dayeen in ay nuqul ka files lumay si u cajaladaha la mid ah.
Qeybta 2: waa maxay weerar?
A drive adag caadiga ah iyo weerar drive adag ku kala duwan yihiin habka ay u shaqeeyaan. Ujeedada Hoose ee weerar waa in ay ka eryis xogta iyo in ay leeyihiin qaab fiican. The ka eryis sare, sare u qabadka. Weerar u taagan tahay Array siyaado ah cajaladaha Independent, asal ahaan loo yaqaan cajaladaha aan qaali ahayn.
Shaqeynta ayaa waxa lagu gaadhaa iyada technology ay isku wadi badan drives disk galay qayb hal macquul ah. Baahida loo qabo shaqo kajoojinta xogta iyo qaab ka duwan tusaale ahaan in tusaale ahaan. Sidaas waxaa jira heerarka qaar sida ka eryis xogta iyo wax qabadka ay saameyn doonto. Waxaa jira tiro la siiyaa hab weerarkaas ay si wanaagsan ugu adeegaan ujeedada. Weerar 0 yahay ugu yaraan ay dulqaad iyo siyaado ah halka weerar 6 leeyahay labo heer oo soo kabashada baadi.
Iyadoo ku xiran tirada weerarkaas, dhib ama ugu shugri nidaamka kabashada xogta lagu kala duwanaayeen doonaa. Haddii mid ka mid disk baajiyo weerar 0 drives, markaas oo dhan cajaladaha lagu khasaaro, mana jirto wax soo kabashada xogta ay suurtagal tahay. Asal ahaan waa farsamo si ay u isticmaalaan in ka badan hal meel kaydinta xogta dhex sinnaanta.
Farsamo Weerarka ayaa loo arki karaa in heerka labaad ee ku salaysan nooca weerarkaas lagu daro tirada weerarkaas. Waxaa jira weeraro Hardware iyo Software weerarada labadaba.
Qeybta 3: Farqiyada u dhexeeya weerar adag iyo weerar Software
Weerar Hardware ka dhigan tahay hab hardware ku salaysan. Hardware ayaa waxaa loogu tala galay iyo in lagu daro in la tixgeliyo farsamo weerarkaas. Waxaa laga yaabaa sidoo kale in la sameeyo iyada oo kaadhka weerar ama loo motherboard laftiisa dhisay. In noocan ah ee technology, cajaladaha oo kala duwan ayaa la isticmaalaa, laakiin nidaamka iyaga oo dhan ku tiriyaa sida disk la mid ah. Awoodda dhashay ee drive weerar ay ku xiran tahay tirada cajaladaha loo isticmaalo, iyo heerka weeraray. Sida caadiga ah ka sarreeya tirada weerarkaas, hoose awood u dhashay ee disk sababtoo ah meel inta badan waxaa loo isticmaalaa isla sinnaanta iyo samaynta kabashada xog badan ka sahlan tahay heerka hore. Tusaale ahaan, haddii tiro la mid ah cajaladaha oo leh awood la mid ah ayaa loo isticmaalaa weerar 0, awoodda sababtay noqon doonaa ka badan marka ay loo isticmaali doono in weerar 6 baabuur.
Weerar Software, sida magaca sheegaye, waxaa keenay by software oo aan loo baahnayn, waayo, hardware in lagu asal ahaan loo qaybiyay si ay noqon drive weerar. In nidaamka kombiyuutarka waxaa jira qalabka sida Manager Device inay si fiican u maareyso qayb kasta oo ka mid ah qalabka ay ku. The software iyo barnaamijyada yihiin sidaas oo kalena haatan hormartay in aan si dhab ah isku dubaridi kara shaqo ee hardware by software sare. Weerar software A waxa lagu gaadhaa iyada u qoondaysay goobo ku drives kala duwan si ay u sameeyaan drive ah weerar dalwaddii. Computer ayaa markaas aqoonsan doonaa dhammaan meelaha la isugu geeyey hal disk hal ama drive. In howlaha kombiyuutarka, dhammaan qaybaha la isku daray ee weerar software ah mid noqon doonaa.
Top 10 Drive Services Recovery Hard
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka cajaladaha Lacie Hard
> Resource > Hard Drive > Top 5 weerar Hard Drive Data Recovery Software